Tapitra ny leraaaaa !!! | NewsMada
Tapitra ny leraaaaa !!!
Miala Rajao!!! Tonga tokoa ilay fotoana efa nandrandrain’ny maro sy nanaovan’ny vahoaka antso avo teny amin’ny kianjan’ny 13 mey ny fialan-dRajao. Miala amin’ny fotoana tokony hialany izy ity. Ny lalàna no manala azy eto.
Voafaritry ny lalàmpanorenana fa tsy maintsy mametra-pialana 60 andro mialoha ny fotoam-pifidianana ny filoham-pirenena raha mbola milatsaka hofidina. Manomboka androany, banga ny toeran’ny filoham-pirenena.
Tanteraka ny hoe: “Miala Rajao”. Hisy kiririoka hifanentanan’ny rehetra ho mari-pifaliana amin’ny fialan’ity filoha ity eo amin’ny toerany. Tsy misy manantena ny hiverenany eo intsony fa mitady olom-baovao sy mahavita azy ny Malagasy.
Anisan’ny tsy levon’ny vavonin’ny Malagasy ny gaboraraka amin’ny fivarotana tany amin’ny vahiny izay nihoa-pampana tao anatin’ny dimy taona nitondrany. Analiny ireo Malagasy noroahina amin’ny taniny ary nitondrana mpitadro filaminana sy norahonana basy mihitsy fa lafo amin’ny vahiny karana sy sinoa ny taniny.
Tompony mangataka atiny ny Malagasy amin’ity raharaha famarotana ny tany amin’ny vahiny ity. Amina hekitara maro ny tany lasan’ny vahiny ary teratany sinoa sy karana ny tena betsaka mibodo tanin’olona.
Tsy mbola nisy famaizana azy ireny satria miray tsikombakomba amin’ireo olona ambony ary mahazo alalana izy ireo amin’izany ka ny Malagasy indray no miafy.
Nirongatra be ihany koa ny vonoan’olona sy ny fakana an-keriny nandritra ny fitondran-dRajao. Miaiky izany ny rehetra ary niara-niaina izany ny Malagasy na an-drenivohitra na ambanivohitra. Mandry an-driran’antsy ny rehetra. Tsy hita hianteherana ny fanjakana. Na ireo mpitandro filaminana aza, tsy hita ho namana.
Miandrandra zavatra tsara ny Malagasy manomboka eto. Vita hatreo ny amin’iny. Olom-baovao, mahasahy miaro ny Malagasy amin’ny taniny ny antenaina hitondra eo. Manana paikady tsara sy vinam-pampandrosoana mahomby ny tokony hipetraka handimby azy eo.